अन्य - Absolut Viajes | Absolut यात्रा (पृष्ठ २)
एक्लै यात्रा गर्न गन्तव्यहरू
त्यहाँ केवल पाँच महादेशमा यात्रा गर्न गन्तव्यहरू छन्। हामी भियतनाम, पेरू, न्यूजील्याण्ड, क्यानडा वा केन्या जस्ता ठाउँहरू सुझाव दिन्छौं।
सेनेगलमा के हेर्ने
यदि तपाई सेनेगलमा के हेर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ कि यो सम्पूर्ण पश्चिम अफ्रिकामा सब भन्दा सुन्दर र स्वागत गर्ने देशहरू मध्ये एक हो।
भारतको आँसुको रूपमा परिचित श्रीलंकाले तपाईंलाई अद्भुत परिदृश्य, दर्शनीय समुद्र तटहरू र प्राचीन स्मारकहरू प्रदान गर्दछ।
युरोपका सब भन्दा सुन्दर शहरहरूले तपाईंलाई धेरै इतिहास, देख्न असाधारण स्मारकहरू र रमाईलो पार्कहरू प्रदान गर्छन्।
ग्यारेन्टीसहितको ग्रामीण घर भाडामा लिन तपाईंले के हेर्नुपर्दछ के तपाईंलाई थाहा छ? यहाँ हामी केहि महान सल्लाह दिन्छौं जुन तपाईंले यी अवस्थाहरूमा अनुसरण गर्नुपर्छ।
मेडिटेरियन क्रूजले तपाईंलाई दक्षिणी यूरोपका मुख्य शहरहरू तिनीहरूका सबै पुरातात्विक र स्मारक आश्चर्यको साथ चिन्न अनुमति दिन्छ।
मालदीवमा गर्ने कुराहरु
यदि तपाईं मालदीवमा के गर्ने भनेर सोच्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यसमा स्मारकहरू र फरक ग्यास्ट्रोनोमी छ, तर सबै भन्दा बढि प्रभावशाली प्राकृतिक सुन्दरताहरू।
ल्यापल्याण्ड मा के हेर्ने
यदि तपाई ल्यापल्याण्डमा के हेर्नुहुन्छ भनेर सोचिरहनु भएको छ भने हामी तपाईलाई बताउछौं कि तपाईसँग उत्तरी उत्तरी बत्तीहरू छ, तर तपाईको भव्य दृश्य र सान्ता क्लाउजको घर पनि।
ती हनीमून क्रूज यात्राहरूको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ? खैर अब तपाइँ तपाइँको संगठित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी तपाईंलाई कसरी र सबै आवश्यक जानकारी बताउँछौं।
इन्डोनेसियाको बालीको यात्रा हाम्रो संसार भन्दा धेरै भिन्न संसारलाई थाहा पाउनु हो। तर सुन्दर प्रकृति र अद्वितीय स्मारक को एक स्थान को भी यात्रा गर्नुहोस्।
बेल्जियमको ब्रुजहरूको अद्भुत ऐतिहासिक केन्द्र छ जुन विश्व सम्पदा हो र विश्वमा विचित्र भवनहरू छन्।
हेलसिंकी इतिहास, स्मारकहरू र संग्रहालयहरूले भरिएको शहर हो। तर तपाईले सोचेभन्दा बढी स्वादिष्ट ग्यास्ट्रोनमी पनि।
क्राको यूरोपको सबैभन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये एक हो। तपाईंले यसमा समृद्ध स्मारक सम्पदा पाउनुहुनेछ, उत्कृष्ट ग्यास्ट्रोनमी र स्वागत गर्ने व्यक्तिहरू।
दृश्यमा कोरोनाभाइरसको आगमनले सम्पूर्ण ग्रहलाई तल मोड्यो। केहि देशहरू बितिसकेका छन् वा यसमा डूबेका छन् ...
हवाईजहाज अझै पनि अधिकांश जनसंख्याद्वारा यातायातको सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने साधन हो भन्ने तथ्यको बावजुद ...
बच्चाहरूको साथ जाने होटलहरू
के तपाईंलाई सबै सुविधाहरू थाहा छ र केटाकेटीहरूको साथ जाने कुन होटेलमा समान छ? यहाँ हामी तपाईंलाई उत्तम पारिवारिक बिदा खर्च गर्न देखाउँदछौं
बच्चाहरू बिना नै होटेलहरूका धेरै सुविधाहरू छन् जुन तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ। के तपाईं एक जोडी को रूप मा वा साथीहरु संग एक्लै गन्तव्यको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ?
पहेंलो पृष्ठहरूको साथ रेस्टुरेन्ट खोज्नुहोस्
पहेलो पृष्ठहरू आतिथ्य र कुनै पनि प्रकारको पेशेवरहरूको खोजीको लागि राज्य सन्दर्भ हुन जारी छ, दन्त चिकित्सकहरूबाट ...
यदि तपाईं एक कारवां भाडामा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले आधारभूत चरणहरूको एक श्रृंखलालाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, ताकि सबै चीज सजीलो बन्न सकोस् र तपाईं आफ्नो छुट्टीको मजा लिन सक्नुहुनेछ।
युरोपमा यात्रा गर्न सस्तो गन्तव्यहरू
के तपाइँ बिदामा जानको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ र धेरै खर्च गर्न चाहनुहुन्न? यी सस्तो गन्तव्यहरू युरोपमा यात्रा गर्न र तपाईंको आरामको आनन्द लिनुहोस्।
तपाईंको यात्रा मा जीवन रक्षा किट: के तपाईं सम्झना गर्न सक्नुहुन्न
के तपाई यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ र तपाईंलाई आफ्नो सुटकेस कहाँ सुरु गर्ने थाहा छैन? तपाईंको यात्रामा हाम्रो बाँच्ने किटमा हेर्नुहोस् र घरमा केही नत्याग्नुहोस्।
जंगली र अप्रशोधित, इन्डोनेसियाको कोमोडो नेश्नल पार्क एउटा प्रमोदवन हो जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो छेपारोको उपस्थितिको लागि प्रख्यात छ।
तपाइँको गर्मी बिदाको लागि अपार्टमेन्ट भाँडामा लिदा तपाइँ धोकामा पर्नबाट जोगिनु पर्छ। तसर्थ, केहि पनी साधारण सल्लाहको श्रृंखला को अनुसरण गर्न को लागी प्रस्तावित छैन
बच्चाहरूका साथ हवाईजहाजबाट यात्रा गर्दै
बच्चाहरूसँग हवाईजहाजको यात्रा हामीले सोचेभन्दा जटिल हुन सक्छ। तर हामी सँधै आधारभूत सुझावहरूको श्रृंखला अभ्यासमा राख्न सक्छौं।
पारिवारिक बिदाको आयोजन गर्नु सधैं सजिलो हुँदैन। तसर्थ, हामी तपाईंलाई लिने चरणहरूको श्रृंखला प्रस्तुत गर्दछौं। सरल र व्यावहारिक!
लेक ब्लेड: परिकल्पना स्लोभेनिया भ्रमण गर्दै
यदि तपाईं स्लोभेनियाको लेक ब्लेड भ्रमण गर्नुहुन्छ भने तपाईंले एउटा जादुई र प्राकृतिक संसार पाउनुहुनेछ जुन उत्तम युरोपेली परी कथाको लागि योग्य छ।
परिवारको रूपमा यात्रा गर्न बीमा, तपाईंको छुट्टीहरूको लागि आराम
परिवार यात्रा बीमा सधैं एक राम्रो विकल्प हो। हामी मानसिक शान्ति प्राप्त गर्नेछौं कभरेजको रूपमा यसको फाइदाहरूका लागि।
भिक्टोरिया फल्समा के हेर्ने
यदि तपाईं आफूलाई संसारको एक महान प्राकृतिक चमत्कारमा हराउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, भिक्टोरिया फल्स सबैभन्दा आकर्षक खोजीमा परिणत हुन्छन्।
कम्बोडियामा एk्ग्कोरको मन्दिरहरूको भ्रमण गर्दै
कम्बोडियामा एk्ग्कोरको मन्दिरहरू भ्रमण गर्नु भनेको संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मारक परिसरहरूमा प्रवेश गर्नु हो। तिनीहरूलाई खोज्नुहोस्!
यदि तपाईं सोफियामा के हेर्ने भनेर सोचिरहनुभएको थियो भने हामी तपाईंको लागि कुनाहरू र कुञ्जी क्षेत्रहरूको श्रृ bring्खलाहरू ल्याउँछौं जुन तपाईंले अविस्मरणीय यात्राको भन्दा बढि यो भ्रमण गर्नुपर्नेछ।
रोमान्टिक भगदडका लागि धेरै गन्तव्यहरू छन् जुन हामी छनौट गर्न सक्छौं। हामीले एक छनौट गरेका छौ जुन तपाईं द्रुत गेटवेमा हेर्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ अग्रिम यात्रा बुकिंगका धेरै फाइदाहरू छन् र तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ। तपाईं देख्नुहुनेछ कसरी यस तरिकाले तपाईं आफ्नो छुट्टी अधिक मजा लिन सक्नुहुन्छ।
यो यात्रा रद्द बीमा भाँडामा लायक छ? आज हामी तपाईंलाई जवाफ दिन्छौं र हामी तपाईंलाई भन्दछौं कि यो के हो र यसमा कभरेज हुन्छ।
आज हामी तथाकथित 'मोसाको छोरी' को माध्यमबाट हिंड्दछौं वा अझ राम्रो डिनान्टको रूपमा चिनिन्छन्। डाइनन्ट, बेल्जियम, र यसको सुन्दर कुनामा के हेर्ने पत्ता लगाउनुहोस्।
वारसामा के हेर्ने भनेर यस पैदल यात्रा नगुमाउनुहोस्। तपाईं ती जादुई कुनाहरूको मजा लिनुहुनेछ, जसले तपाईंलाई यसको इतिहास र संस्कृतिमा पुर्‍याउँछ।
थाइल्याण्डमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
थाईल्याण्डका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरूको चयन, जहाँ तपाईं आफ्नो बसाईको उत्तम दिनहरू र रातहरू खर्च गर्नुहुनेछ। सबै स्वादको लागि विस्तृत प्रस्ताव।
अक्टुबर मा कहाँ यात्रा गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्। उत्तम ठाउँहरू, राम्रो तापमान र आविष्कार गर्न धेरै चीजहरूको साथ। दुई पटक नसोच्नुहोस्!
मेकोong्ग डेल्टा: भियतनामको उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रहरूमा बहाव
नरिवलका रूखहरू, विस्तृत चामल मैदानहरू वा तैरिएका गाउँहरू मेकोong्ग डेल्टामा पर्खिरहेका छन् जसले भियतनामको जादु र आकर्षण प्रकट गर्दछ। के तपाई यो जान्न चाहानुहुन्छ?
गन्तव्य बिना उडानहरू, कसरी तिनीहरू काम गर्छन्?
हामी गन्तव्य बिना उडानको फाइदा प्रकट गर्दछौं, उही समयमा हामी तपाइँलाई कसरी काम गर्छौं भनेर बताउँछौं र तपाइँ जस्तो कि सम्झौता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी गेम अफ थ्रोन्समा केहि महत्वपूर्ण स्थानहरू समीक्षा गर्दछौं। श्रृंखलाहरूमा हामीले देखेका अद्वितीय स्थानहरू।
सूटकेस बिना यात्रा गर्नु राम्रो विचार हो। यदि तपाईं अझै विश्वस्त हुनुहुन्न भने, यसको महान फाइदाहरू र अधिक रमाइलो यात्राको कारणहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
उत्तरी लाइटहरू कहाँ हेर्ने
यदि तपाइँ उत्तरी लाइटहरू कहाँ हेर्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई उत्तम बिन्दुहरूको साथ छोड्छौं जहाँ तपाईं यस सुन्दर प्राकृतिक घटनाको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंको अर्को गन्तव्य फिजी टापु हो भने, हामी तपाईंलाई अविस्मरणीय भन्दा बढि त्यो यात्राको लागि आवश्यक पर्ने सबै जानकारीहरू दिनेछौं। यी टापुहरूमा के गर्ने बाट, मूल्यहरू र चासोको डाटा जुन हामीलाई अत्यावश्यक छ। के हामी प्याक गर्दैछौं?
तन्ना प्रशान्त महासागरमा अवस्थित छ। यो भानुआटु टापु बनाउने धेरै टापु मध्ये एक हो। तर कुनै श doubt्का बिना, उनीसँग खोजी गर्न धेरै विचित्र छन्। यो रहस्यमय टापुको बारेमा हो जुन जुलुस भर्नले हामीलाई त्यस समयमा भनेको थियो। के तपाई यसमा जान चाहानुहुन्छ?
जब हामी जाँच गर्न लामो लाइनहरू पर्खन चाहँदैनौं, हात सामान हाम्रो सबै भन्दा राम्रो सहयोगी बन्छ। तर हो, हामीले आफुलाई के लिन सक्छौं र के लिन सक्नुहुन्न भन्ने बारे हामीले सँधै आफैंलाई सूचित गर्नुपर्दछ। त्यसो भए, आज हामी ती सबै शंकाहरू हटाउँदछौं जुन तपाईको टाउकोमा सताउछन्।
हामी तपाईंलाई संसारको केही उत्तम समुद्र तटहरू देखाउँदछौं जहाँ तपाईं अद्वितीय र जादुई वातावरणहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, प्रकृतिले घेरिएको छ र अवश्य पनि, धेरै सुन्दरता। के तपाइँ हामीले उल्लेख गरेका कुनै एकमा हुनुहुन्छ? ती जीवनकालमा एक पटक रमाईलो गर्न लायक छन्।
हामी ठूलो स्क्रिनमा एक प्रख्यात मरूभूमिबाट हिंड्छौं। वादी रुम "लरेन्स अफ अरेबिया" जस्ता चलचित्रहरूको लागि सेटिंग गर्दै थिए र जीवनमा एक पटक जीवित रहन योग्यका धेरै रहस्य र जिज्ञासाहरू लुकाउँछिन्।
तपाईं कसरी संसारको सबै कुनामा स्वयंसेवकको रूपमा नि: शुल्क यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। तपाइँ र तपाइँको भविष्यका लागि एक धेरै समृद्ध अनुभव।
लेउभन डिस्कभर: परम्परा, संस्कृति र जीवनको मिश्रण। न्युहरू र सौन्दर्यले भरिएका स्मारकहरू जुन तपाईं गेटवेमा देख्न सक्नुहुनेछ।
ब्राटिस्लावामा के हेर्ने भनेर याद नगर्नुहोस्। स्लोभाकियाको राजधानीसँग धेरै किनाराहरू छन् जहाँ कला आख्यान र इतिहास भेटिन्छ देखाउन।
यदि तपाइँ विश्वभरको यात्रा कसरी व्यवस्थित गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने, तयारीका लागि उत्तम सल्लाहहरू नभुल्नुहोला जुन आज हामी तपाइँलाई छोड्छौं।
सस्तो यात्राको लागि सुझावहरू
हामी तपाईलाई सस्तो यात्राको लागि उत्तम सल्लाह दिन्छौं। यदि हामी कल्पना गर्न भन्दा बढी बचत गर्न चाहन्छौं भने खातामा लिने साना कदमहरू।
माल्टामा के हेर्ने भनेर सम्झनुहोस्। यसको मुख्य टापुहरूको भ्रमण, साथै यसका महान वास्तु र सांस्कृतिक खजानाले भरिएका शहरहरू
यदि तपाइँ थाईल्यान्डको ब्याकप्याकरका रूपमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो मार्गनिर्देश याद गर्नुहुन्न जहाँ हामी तपाइँलाई के ल्याउने, कसरी यात्रा गर्ने, मुद्रा विनिमय र अन्य युक्तिहरू सिकाउँछौं।
केप भेर्डेको साल टापु अफ्रिकाको सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तटमा नुहाएको र न्यानो र अतिथि सत्कार गर्ने मानिसहरू बस्ने स्वर्ग हो।
सहरी र ग्रामीण होटल बीचको भिन्नता
ग्रामीण पर्यटन के हो भनेर थाहा नहुनेहरू प्रायः ग्रामीण बसोबासको भिन्नता केमा छक्क पर्दछन् ...